Mpanankarena an-tapitrisany toko faha-3345 - 3346 - XperimentalHamid
Lehilahy mpirotsaka an-tapitrisany toko faha-3345 - 3346
Jolay 25, 2021 Jolay 24, 2021 by Hisam Ullah
Vakio Toko 3345 - 3346 amin'ny tantara Ilay vady aman-tapitrisany by Ravina Lord maimaim-poana amin'ny Internet.
Tsapan'i Charlie fa tena namela ny tenany ho ao amin'ny tafika izy, mba hitady izay misy ny komandà faratampon'ny mpanohitra, ary na dia ny mifehy ny antoko hafa aza, izay tena tsy dia misy loatra.
Ankoatr'izay dia mbola tsy fantany hoe iza ny komandy ambony amin'ny mpifanandrina ary manao ahoana ny endriny.
Rehefa olona mihoatra ny 10,000 no ao anatiny, na dia afaka miditra an-tsokosoko aza izy dia sarotra ny mitady ny iray hafa ary mamaritra ny mombamomba azy ao anatin'ny iray na roa andro.
Fa eritrereto amin'ny lafiny hafa ity olana ity. Tsy dia sarotra izany.
Afaka manatona azy mivantana izy.
Raha vao naheno ny tenin'i Charlie i Hamid dia nitaraina ny olona iray manontolo nanao hoe: "Ahoana no ahafahan'ity Rahalahy ity miasa? Ity karazan-javatra ity dia azo antoka fa sivifolo isan-jato no maty, ahoana no hataonao handraisana izany loza izany? ”
Nitsiky tamim-pahanginana i Charlie ary nilaza hoe: “Amin'ny maha mpirakidraharaha anao ahy dia handeha hihaona amin'ny ankilany amin'ny lafiny lehibe aho, inona no atahorana hamono tena? Honoin'izy ireo ve aho? ”
Hamid dia nilaza tamim-pahatsorana hoe: “Tsy hoe tsy misy izany mety hitranga! Ny ankolafy hafa izao dia mankahala ahy amin'ny taolam-paty, ary mety tena hamoaka izany aminao! ”
Nihomehy i Charlie: “Tsy hitranga izany. Misy fomban-drazana taloha, firenena roa misy ady, tsy mamono ireo iraka, ary io koa no fitsipika ifotoran'ny firenena rehetra manerantany. "
"Toy ny Fifanarahana tany Genève, satria voafaritra fa tsy misy fanahy iniana famonoana mpitsabo eny an-tsahan'ady, ny firenena rehetra dia tokony hanaja ity fitsipika fototra ity, toa ireo firenena fasista roa tamin'ny Ady lehibe II tsy nanaiky ny fivoriambe. , Mino aho fa mazava ihany koa ianao. ”
Nanampy izy hoe: "Raha afaka mivoatra amin'ity ambaratonga ity ny Cataclysmic Front ary te-hipaka any Moyen Orient, dia tena hanaraka ireo fotopoto-pitsipika fototra ireo izy ireo."
Hoy i Hamid: “Saingy mety tsy te hihavana amiko ry zareo, ny heviny ankehitriny dia ny hiady amiko hatramin'ny farany, voalaza fa efa ela ry zareo no namoaka ilay teny hoe raha mbola avy any am-potoko io, na dia totozy iray aza , tsy hanafaka izy ireo. ”
Nihomehy i Charlie: “Tsy misy dikany ny filazan'izy ireo teny henjana kokoa, ny tena zava-misy dia. Miaraka aminao amin'izao fotoana izao izy ireo ankehitriny, tsy hitondra soa ho azy ireo izany. "
Taorian'ny nilazany izany dia nanohy ny famakafakana nataony i Charlie, "Ity fikatsoana ity, ety ivelany, toa tsy mahaliana anao, fa raha ny tena izy, ny tena fatiantoka dia ny Cataclysmic Front sy ny tafiky ny governemanta."
Hoy i Hamid tamin'ny tarehy malahelo: “Rahalahy, raha ny marina, raha miteny amin'ny fo aho dia somary tsy azoko antoka indraindray, tsy ampy ny fotoana fiomanako.”
“Ka tsy ampy ny enta-mavesatra, lavitra ny torohevitrao talohan'izay nandritra ny telo taona nitahiry tahiry stratejika, ary ankehitriny dia nitombo imbetsaka ny olona, ​​olona efa ho 10,000 eto hihinana sy hanome sakafo ny soavaly, no hanafaingana ny fihinanana famatsiana. , ny be indrindra haharitra herintaona sy tapany …… ”
Raha niresaka an'izany i Hamid dia nisento ary nilaza tamim-pahamatorana hoe: “Rahalahy, sokatra ao anaty siny io ah!”
Nihomehy i Charlie: “Inona ny tahotry ny sokatra ao anaty siny? Raha mbola matanjaka io siny io, ny antoko iray hafa dia tsy afaka mamaky ny tavoahanginao mafy ao anatin'ny fotoana fohy. ”
Raha nilaza an'izany i Charlie dia nanampy hoe: “Ankoatr'izay, tsy maintsy mahatakatra zavatra iray ianao, ny toe-javatra misy anao ankehitriny dia hafa tanteraka amin'ny azy ireo. Na dia voafandrika ao anaty siny ianao, nefa ity no akaninao. ”
“Sakanana ao an-tranonao fotsiny ianao, misy sakafo sy zava-pisotro, inona no atahoranao? Tsy vitan'ny hoe tsy tokony hatahotra ianao, fa ny kalitaon'ny fiainanao koa tsy hanana fihemorana akory satria voafandrika. ”
Raha niresaka an'izany i Charlie dia nitodika ny teniny ary nihomehy: “Fa ireo olona manao fahirano anao any ivelany ireo dia tsy faly toa anao.”
"Ny tafika misy olona 15,000 ka hatramin'ny 20,000 XNUMX izay mandrafitra ny Cataclysmic Front ary ny tafiky ny governemanta dia tsy maintsy mijanona eto amin'ny rivotra sy ny orana amin'ny fotoana rehetra, miaraka amin'ny rivotra sy orana, ny masoandro sy ny orana. Tsy maintsy notanterahin'izy ireo teo am-baravarana izany, mba ho azonao an-tsaina hoe iza no manana fotoana sarotra. ”
Rehefa naheno an'io i Hamid dia nibaliaka tampoka ny masony. Faly erỳ nilaza hoe: “Rahalahy, mandeha ianao… ..”
Nihomehy i Charlie: “Hitanao fa toy ny vondrona sakafon'ny mpanjono izay nihazakazaka nankany amin'ny farihy trondro mainty izy io, nitady faniriana fatratra ny hahazo ireo trondro mahazatra lehibe indrindra ao anaty dobo, saingy ny fierena trondro lehibe ao anaty rano dia tsy aseho ny lohany. ”
“Tsy manan-tsafidy ireo namana mpanarato fa ny mihidy vazana sy manangana tranolay eo amoron'ny dobo trondro, vonona hiady amin'ny ady maharitra.”
"Ny rivotra sy ny orana, ny masoandro, ny sakafo sy ny torimaso, ny kaikitry ny moka, na dia, nefa koa nahemotra ny asa lehibe, dia tsy afaka manjono trondro, ny karama isan-jatony an'arivony an'arivony dia tsy anaovana asa, na herintaona orinasa an-tapitrisany maro no tsy manao an'io? ”
“Noho izany, azon'izy ireo atao ny manao iray na roa na roa andro ao amin'ny farihy fiandrasana trondro. Iza no mahazaka azy mandritra ny telo na dimy andro? ”
"Na dia misy sakaiza manjono mafy fo aza izay mafy hatoka ka afaka mamikitra ny nifiny ary mamoaka azy, fa rehefa mamoaka azy mandritra ny herinandro izy ary tsy tratra ny trondro dia hoentin'ny vadiny ny zanany ary nanambady ny anti-panahy teo akaikiny indray, ka inona koa no azony atao amin'izao fotoana izao? ”
Faly i Hamid nilaza hoe: “D * mn, dia toy izany!”
Nihorakoraka i Charlie: “15,000 ny olona avy ao amin'ny Cataclysmic Front tonga eto hanao fahirano an'io trondroo io, ary am-polony tapitrisa dolara ny vola lany isan'andro. Ary very tanteraka io vidiny io. ”
“Fa ahoana kosa raha misintona any an'ady hafa ireo olona 15,000 ireo? Angamba ny vola azo dia mahavita mandany vola amina tapitrisany dolara isan'andro, nefa koa mitondra tombony am-polony tapitrisa dolara any amin'ny Cataclysmic Front, ity fifamadihana sy tsara ity, an-tapitrisany roa tapitrisa izany, araka ny hevitrao fa hainy tariho izy? ”
Raha niresaka an'izany izy dia nitsiky i Charlie ary nilaza tamim-pahamendrehana hoe: "Raha tena sahy misintona anao mandritra ny herintaona sy tapany ny Cataclysmic Front, dia tsy lany ny entanao, ny bankin'ny Cataclysmic Front mihitsy no ho bankirompitra."
"Mpikarama an'ady, mpikarama an'ady ary mpiasan'ny ekipa mpanao fanorenana ny ankamaroan'ny olona ao aminy, izay mandoa vola hiara-miasa amin'izy ireo, tsy mandoa na manome kely, dia handeha tokoa izy ireo."
"Renao hoe iza amin'ireo mpiasa ao amin'ny ekipa mpanao trano no manana fihetseham-po amin'ny tompona tranokala, tsy afaka mandoa karama, ary mbola manohy miasa am-pahavitrihana ho azy?"
Nihomehy i Hamid ary nilaza tamim-pifaliana hoe: “Mahazo! Tena azoko izany! Raha ny tena izy dia tsy izaho, ilay fano ao anaty siny, fa izy ireo, ry zalahy te hisambotra ilay sokatra! ”
Nihomehy i Charlie ary nihomehy: "Ka mino aho fa ny Cataclysmic Front dia tsy maintsy miahiahy amin'izao fotoana izao, raha manambara tampoka ianao fa te hihavana amin'izy ireo amin'izao fotoana izao, dia tena hararaotin'izy ireo izany fotoana izany."
"Na dia tsy vonona ny hihavana aminao aza izy ireo, dia tena hararaotin'izy ireo io fotoana tsara io hifandraisana amin'ireo olona eo anilanao aloha, mba hahafahan'izy ireo mahatsapa ny fihetsikao sy manadihady ny vavanao."
Nihifikifi-doha i Hamid ary nilaza hoe: “Misy dikany ny fanadihadian'ny Rahalahy! Avy eo aho hahita fantsona hifandraisana amin'izy ireo ary hijerena raha vonona hifampiraharaha izy ireo! ”
Nihomehy i Charlie: “Rehefa mifandray amin'izy ireo dia tsy maintsy tso-po ianao ary lazao azy mivantana fa raha te hiresaka izy ireo, dia handefa olona manana fahefana feno ianao hisolo tena anao ho any amin'ny faritanin'izy ireo manokana hiresaka amin'izy ireo”
“Saingy tokony holazainao tsara amin'izy ireo fa ny solontenanao dia tokony hiresaka amin'ny Commander Supreme of the Cataclysmic Front!”
Hamid avy hatrany dia nilaza hoe: "Tsy misy olana, manana namana mpanome entana ho an'ny tafiky ny governemanta aho ary manana fifandraisana tsara amin'ny varahina lehibe an'ny tafiky ny governemanta, azoko atao ny mangataka azy hanampy amin'ny fandefasana hafatra!"
Eritreritra 6 momba ny "Millionaire Son in Law Novel Chapter 3345 - 3346"
Ma. Josefa lopez
Jolay 26, 2021 ao amin'ny 12: 51 AM
Muy buenos acertijos para compar el momento
Jolay 25, 2021 ao amin'ny 10: PM PM
Jolay 25, 2021 ao amin'ny 8: PM PM
Interesante novela por favor los capítulos 3347, y más
Jolay 25, 2021 ao amin'ny 8: 11 AM
Buen libro, fa tsy misy gusta el personaje de Sara no importa mahita contrat matrimonial si la otra persona esta casada se respeta. Izao no lazain'ny olona voalohany momba ny fisaraham-panambadiana sy ny fisamborana azy ireo: tubiera nada.
Jolay 24, 2021 ao amin'ny 9: PM PM
Misy zavatra hafa ve?